Marc Ravalomanana : Vonona hiatrika « 2è Tour » -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Vonona hiatrika « 2è Tour »
Marc Ravalomanana : Vonona hiatrika « 2è Tour »
19/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy azo ihodivirana fa tsy maintsy hirosoana ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Nanambara ny fahavononany hiatrika izany kosa ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, tamin’ny alalan’ny talen’ny fampielezan-kevitra.
Araka ny efa fantatra, navoakan’ny teo anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, na CENI, ny sabotsy 17 novambra teo, ny voka-pifidianana vonjimaika tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana voalohany.
Mazava izany izao fa kandidà roa, Marc Ravalomanana, laharana faha-25, nahazo vato 35,29%, sy Andry Rajoelina, laharana faha-13, nahazo vato 39,19%, no hiatrika ny fihodinana faharoa, na « 2è Tour ».
Ho an’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, dia vonona tanteraka hiatrika izany fihodinana faharoa izany ny tenany sy ny ekipa miaraka aminy. Araka izany, nambaran’ny talen’ny fampielezan-kevitra, Rabenja, fa mety amin’izy ireo iny vokatra tamin’ny fihodinana voalohany iny, eny fa na maro aza ny tsy fahatomombanana tazana tamin’iny fifidianana iny. « Nivoaka soa aman-tsara iny ny voka-pifidianana vonjimaika avy tamin’ny CENI. Isaorana manokana ny Malagasy rehetra, indrindra fa ireo mpifidy nahatontosa izany adidy masina amin’ny tanindrazana izany. Mazava izao fa hiatrika ny fihodinana faharoa, ny 19 desambra izao isika, koa eto izahay dia manao antso avo amin’ny mpiray tanindrazana mba hanatanteraka hatrany ny latsa-bato, satria adidy masina ny fanehoan-tsafidy amin’ny alalan’ny fifidianana. Aoka mba tsy ho voarebireby intsony isika Malagasy fa haneho marina ny tena safidy », hoy Rabenja, talen’ny fampielezan-kevitry ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana.
Notsindrian’ity talen’ny fampielezan-kevitra ity hatrany, fa efa tokony hiomana amin’ny fiatrehana ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena ny rehetra. Ho azy ireo, raha ny nambarany, na dia hiroso amin’ny « 2è Tour » aza, mbola maro ny fitoriana sy fitarainana alefan’izy ireo eny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), mahakasika ny tsy fahatomombanana tsikaritra tamin’iny fifidianana fihodinana voalohany iny.
Hatreto kosa, mbola tsy nanambara ireo izay miaraka aminy amin’ny fanohanana ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, ny teo anivon’ny komity mpanohana KMMR. « Ho hitantsika miandalana eny ihany ireo antoko politika, na vondrona hanohana ny kandidà laharana faha-25. Amin’izao mantsy, mbola tsy afaka manambara izany izahay », hoy Rabenja.